घोराहीको तुलसिपुर चोकमा ब्यबसायिले गरे रित्तो थाल बजाएर विरोध… - जागरण अनलाइन
रित्तो थाल बजाएर विरोध
दाङ, २३ जेठ । सोसल मिडियाबाट सूचना प्रवाह गरियो, ‘शुक्रबार तुलसीपुर चोकमा ४ बजे जम्मा होऔं अनी करको ताकेताका बिरुद्धमा प्रदर्शन गरौं ।’ युवा व्यवसायीहरु थिए यस्तो सन्देश प्रवाह गर्नेहरुमा । त्यही सूचनाका आधारमा ४ बजे क्रमशः त्यहाँ युवाहरुको एउटा भीड जम्मा हुन थाल्यो । झण्डा, मसाल, प्लेकार्ड केही थिएन ती सरकारी निर्णयको विरोध निस्केकाहरुको हातमा । बरु थियो, रित्तो थाल र चम्मा । सूचना दिँदा पनि यसरी आउन भनिएको थियो ।
सोसल मिडियाको सूचनाका भरमा जुटेका उनीहरुका साथमा व्यानर पनि थिएन । ‘स्वतःस्फूर्त भएका कारण व्यानरको आवश्यकता नै भएन’ एक व्यवसायी सुरज बुढाथोकीले भने । चम्चाले रित्तो थालमा ठोक्दाको आवाजले केहीबेर तुलसीपुर चोक गुञ्जियो । त्यो चोकमा यसरी प्रदर्शन गरिएको सम्भवतः पहिलो पटक थियो । ‘लकडाउनमा जारी रहँदासम्म कर तिर्न नसकिने कुरा सरकारलाई सुनाउन यो शैली अपनाएका हौं’, बुढाथोकीले भने– ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कर तिर्न सकिन्छ र !’
सरकारले जेठ २५ मा कर तिर्न ताकेता गरेको थियो । त्यस निर्णयको बिरोध भएपछि असार ७ गतेसम्मलाई समय दिइएको छ । तर व्यवसायीहरुले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकेपछि मात्र कर तिर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । ‘लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनापछि मात्र कर तिर्न सकिन्छ’, बुढाथोकीले आफूहरुको मागका बारेमा जानकारी दिँदै भने । व्यवसाय बन्द गरेर घरमा बसेका व्यवसायीहरुलाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने अवस्थामा अझै समस्यामा पारेको गुनासो सो विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित व्यवसायीहरुले गरेका थिए ।
संकटको अवस्थामा राज्यले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने अर्का व्यवसायी मिनराज भाटले बताए । ‘राज्यलाई कर तिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या राज्यले बुझ्न सकेन’, भाटले भने । सरकारले गरेको यस प्रकारको निर्णय नसच्चाए आफूहरु थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले लकडाउनको विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।
दाङका एसपि राष्ट्रपतिबाट विभुषित
२०७८ बैशाख १, बुधबार २१:१३
उम्मेद्वार छनौटमा अन्याय गरेको भन्दै पत्रकार गजमेरले युनियन छाडे !
२०७७ चैत्र २२, आईतवार १९:४८
चौतारीबाट दुर्गालाल केसिको प्यानलले पत्रकार महासंघ दाङमा उम्मेद्वारी दर्ता
२०७७ चैत्र २२, आईतवार १८:३७
नवनियुक्त महेन्द्र बहुमुखीका सहायक क्याम्पस प्रमुख चौधरीले गरे पदभार ग्रहण
२०७७ चैत्र १७, मंगलवार १६:५२
दाङमा चोरीका घटना बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्नतर्फ प्रहरी प्रशाशनसंग ब्यबसायीको माग !
२०७७ चैत्र १५, आईतवार २२:१५
नारायणपुर उबासंघको अध्यक्षमा ब्यबसायी अभियान बस्नेत सर्बसम्मत चयन !
२०७७ चैत्र १४, शनिबार १८:१५
महासंघको स्थानीय आर्थिक बिकास समितिमा बुढाथोकी मनोनित
२०७७ चैत्र ६, शुक्रबार १९:४६
बुद्ध हस्पिटलमा दोस्रो पटक अप्रेसन असफल भएपछि काठमाडौंमा तेस्रोपटक अप्रेसन – सरु पाण्डे बस्नेत
२०७७ चैत्र ५, बिहीबार २२:१५
कोरोना भाइरस भारत: नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सहभागी हरिद्वारको कुम्भमेलामा सयौँ भक्तजन सङ्क्रमित April 15, 2021